प्रधानमन्त्री आफै गलत कि उनका सल्लाहकार ? - नेपालबहस
प्रधानमन्त्री आफै गलत कि उनका सल्लाहकार ?
| ६:०५:५८ मा प्रकाशित
नेकपाको वर्तमान अवस्था र आन्तरिक बिवादलाई हेरेर अहिले नेपाली जनताहरु समेत आजित भैसकेका छन् । बर्षौंसम्म एउटै कुराको सुगा रटाई देखेर नेकपाका नेता तथा कार्यकर्ता मात्र हैन तमाम नेपालीहरु नै यो नेकपा भनेको कस्तो पार्टी हो ? भनेर प्रश्न गर्न थालेका छन् । देश बनाउलान कि भनेर जनताले आफ्नाे अमुल्य मत दिएर कुर्सीसम्म पुर्याईएका नेकपाका नेताहरुले जनताको अमुल्य मतको कदर गर्न सकेनन् । बरू विनाकारण देशको ३ बर्ष त्यसै बर्बाद भो भन्ने नपालीहरुको समूह बढदै गैइरहेको छ ।
तर पनि नेकपाका नेता तथा कार्यकर्ताहरुलाई भने मान्नै पर्छ, हरेक दशैं, तिहार, छठ, ल्होत्सार, बुद्ध जयन्ति लगायतका चाडपर्वमा पार्टीका तिनै नेताहरुलाई फुलमाला र अबिर लगाएर सम्मान गर्दै शुभकामना गर्न भने अझै पनि छाडेका छैनन् ।
हुन पनि प्रधानमन्त्रीका सहयोगी टीममा यस्ता पनि मान्छे छन् कि प्रधानमन्त्रीले र सिंगो सरकारले गरेका नराम्रो कामको बिरोध गर्नै नपाईने अवस्था छ । सरकार र सरकार सञ्चालन गर्ने व्यक्तिहरुका नराम्रो कामको आलोचना मात्रै गर्दा पनि प्रधानमन्त्रीका सहयोगीहरु नागरिकमाथि ठाडो आक्रमण गर्न आईपुग्छन् । पार्टीका अध्यक्षद्धारा पार्टीको सचिवालयमा बिधिवत र नियम संगत आएको प्रस्तावलाई पनि प्रधानमन्त्रीको काउछोको रुपमा लिन्छन् ।
प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक कहिले प्रधानमन्त्रीको आधिकारिक ट्वीट एकाउण्ट आफै चलाउछन् त कहिले पार्टीको आधिकारिक रुपमा आएका एजेण्डाहरु देखेर डरले भित्रभित्रै आफै–आफै बर्बराउँछन् । पार्टीमा आएका बिषयहरु पार्टीको आधिकारिक निकाय सचिवालय या स्थायी कमिटीबाट छलफल गरे भै गो नि, खाली बैठकबाट भागेर मात्रै समस्याको समाधान हुन्छ र ? भन्ने विचारहरु पनि बाहिर आईरहँदा प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजकसमेत रहेका व्यक्तिबाट मात्र हैन पूर्वमन्त्रीसमेत रहेर भ्रष्टाचारको दुर्गन्ध पखाली नसकेका व्यक्तिहरुबाट नेकपा कै अर्का पार्टी अध्यक्षको मानमर्दन गर्दै हिँडनुले पनि अब सिंगो नेकपा रहला ? भन्ने बिषयमा अब शंका गर्ने ठाउँहरु देखिदैछन् ।
यति मात्र हैन हिजोको नक्कली राष्ट्रबाद छोप्न खोज्दा पनि जताततैबाट उध्रिन मात्रै थाले पछि राष्ट्रवाद भित्रका गुह्य कुराहरुसमेत बाहिर असरल्ल पोखिएको अवस्थामा पुगेका छन् । वास्तवमा प्रधानमन्त्रीका केहि वरिपरीका मान्छेहरु र नगद नारायणमा बिशिष्ठ योगदान पुर्याईरहेका केही बदनाम समूहहरुको कारण प्रधानमन्त्री मात्र हैन सिंगो नेकपा नै बदनाम बन्न पुगेको छ । वास्तबमा भन्ने हो भने यिनै धुन्धुकारीहरुले नै सिध्याउने भए नेकपा ।
अहिलेको राजनैतिक व्यवस्था र वर्तमान देशको अवस्था हेर्दा देशका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भाले मेवाको बोट झै देखिएका छन् । न घाँस काम लाग्ने, न फल नै फलेर खान मिल्ने, न दाउराको रुपमा उपयोग गर्नु न खेतबारीमा मल हाल्न मिल्ने जस्ता देखिएका ओलीलाई हिजो नेपालीले अत्यन्तै ठूलो आशा र भरोषाका साथ हेरेका थिए । एक समयमा छलफल र बहसबाट मात्रै निचोड कुरा निस्कन्छ भनेर पार्टी भित्र व्यापक छलफल र बहस चलाउने ओली अहिले सामान्य रुपमा बहसमा आएका बिषयहरुमा समेत बहस गर्ने ल्यागत नभएको अवस्थामा पुगेका छन् ।
अहिले तिनै साहसिक विचारका धनि ओली बहस र छलफललाई निरुत्साहित गर्न ओछ्यानबाटै विभिन्न खालका धम्कीसहितका अभिव्यक्ति दिंदै दिन कटाउँदै गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । नेकपाको बैठक हुने नहुने, बस्ने नबस्ने कुरा पार्टीको आधिकारिक व्यक्ति वा सचिवालयले भन्नु पर्नेमा प्रधानमन्त्रीको निजी एउटा सल्लाहकारले निर्णय दिन्छन् भने नेकपाको समस्याको चुरो कहाँ छ भनेर कुरो त्यसै प्रष्ट हुँदैन र ?
डबल अध्यक्ष रहेको नेकपामा एउटा अध्यक्षले प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अर्का अध्यक्षलाई पार्टी भित्र देखिएका समस्याहरुका बिषयमा छलफल गर्न लिखित रुपमा पेश गरेको कार्यपत्रलाई प्रचण्डको विरोध पत्रको रुपमा मात्र बुझ्न स्वयं प्रधानमन्त्रीकै भाषामा निम्छरो सोचाईका रुपमा बुझ्नेहरुको जमातका रुपमा रहेका पाँच सल्लाहकारहरु र तिनै पाँच सल्लाहकारलाई नै सिंगो पार्टी देख्ने प्रधानमन्त्री ओली नै वर्तमान नेकपाका समस्याका जड त हैनन् ? भनेर बाहिर आम नागरिकहरुमा चर्चा हुने गरेको पाईन्छ ।
एउटा पोखरेल नेतालाई ओलीको पछि लाग्दा पानीट्यांकी भर्न पाईन्छ भन्ने गलत सोच छ । अर्का प्रमुख पोखरेललाई प्रदेशमा बस्नु भन्दा बालुवाटार अघिपछि गर्न पाए र दुई अध्यक्षमा भाँजो लगाउन पाए अझै केही समय कुम्ल्याउने अबसर मिल्ने कुरामा ढुक्क छन् । युवा नेता मानिएका योगेश भट्टराई पनि परिवारवादमै व्यस्त छन् ।
प्रधानमन्त्रीलाई नै दिग्भ्रमित पारी अध्यारो कोठामा राखेर गलत सूचना प्रवाह गर्न माहिर यिनै माथिका नेता तथा सल्लाहकारहरुलाई प्रधानमन्त्रीले भने अझैसम्म पनि चिन्न सक्नु भएको छैन । जसका कारण धेरैजसो बिषयमा प्रधानमन्त्री आफु केही नबोलिकनै सल्लाहकारहरुका व्यक्तिगत अभिव्यक्तिका कारण पनि अनाहकमा नाङ्गिएका प्रसस्त उदाहरणहरु छन् ।
तर बन्द कोठालाई नै संसार देख्ने अनि बालुवाटारसम्म पुगेर बिन्ति मात्रै बिसाउँदा पनि गुजारा चलाउनेहरुका लागि भने यी र यस्ता कुरा गलत, भ्रामक, कपोलकल्पित र बेतुकका लाग्न सक्छन् । वास्तबमा कुरो सहि हो या गलत ? भनेर कुनै दिन त स्वयं प्रधानमन्त्री पनि त बालुवाटारबाट बाहिर निस्किएर आम नेपाली नागरिकका बिचमा बुझ्न जान पनि त सक्छन् ।
हुन त ओलीलाई अहिलेको अवस्थामा ल्याई पुर्याउन नेकपा भित्रकै ५ नेताहरुको हात रहेको बताईन्छ । यिनै नेताको भरपर्दा ओली अहिले यतिसम्म बदनाम र दुर्गन्धित हुनुपरेको नेकपाकै नेताहरु बताउँछन् । गोकुल बाँस्कोटा जस्ता छुद्र बोली भएका नेताले शुरुका बर्षमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई बदनाम मात्रै गराएनन्, नीतिगत भ्रष्टाचार गर्न समेत सिकाएर गए । सूर्य थापालाई बालुवाटार छिराए पछि नेकपा भित्रको एकतासमेत नराम्ररी भत्काए । प्रधानमन्त्रीले दिनु पर्ने कतिपय निर्णयहरु सूर्य थापाले नै भ्याईदिन्छन् ।
हिजोको नक्कली राष्ट्रवाद छोप्न खोज्दा पनि जताततैबाट उध्रिन मात्रै थाले पछि राष्ट्रवाद भित्रका गुह्य कुराहरुसमेत बाहिर असरल्ल पोखिएको अवस्थामा पुगेका छन् । वास्तवमा प्रधानमन्त्रीका केहि वरिपरीका मान्छेहरु र नगद नारायणमा बिशिष्ठ योगदान पुर्याईरहेका केहि बदनाम समूहहरुको कारण प्रधानमन्त्री मात्र हैन सिंगो नेकपा नै बदनाम बन्न पुगेको छ । वास्तबमा भन्ने हो भने यिनै धुन्धुकारीहरुले नै सिध्याउने भए नेकपा ।
वरिष्ठ नेताहरुको संख्या अत्यधिक भएको नेकपामा प्रधानमन्त्री भने यस्तै सल्लाहकारको मात्रै भर पर्छन् । एउटा पोखरेल नेतालाई ओलीको पछि लाग्दा पानीट्यांकी भर्न पाईन्छ भन्ने गलत सोच छ । अर्का प्रमुख पोखरेललाई प्रदेशमा बस्नु भन्दा बालुवाटार अघिपछि गर्न पाए र दुई अध्यक्षमा भाँजो लगाउन पाए अझै केही समय कुम्ल्याउने अबसर मिल्ने कुरामा ढुक्क छन् । युवा नेता मानिएका योगेश भट्टराई पनि परिवारवादमै व्यस्त छन् ।
यिनै ५ नेताले प्रधानमन्त्री ओलीलाई गर्ने नगर्ने सबै काम गर्न लगाए । गाँजा खाए झै हुने गरी लठ्ठै बनाएर पार्टीलाई टुकुचामा लगेर बगाउनु पर्ने अवस्थाको स्थितिमा पुर्याए ।
नेकपा भित्र अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टीलाई चलायमान बनाउन र आम पार्टी कमिटिका सदस्यहरुको विचार र भावना अनुरुप पार्टी चलाउन पार्टी भित्र के फरक मत राखेका मात्र थिए बालुवाटारमा रुवाबासी चलेको आवाज सिंगो देशभरी गुञ्जिएको छ । यति मात्र हैन हिजोको नक्कली राष्ट्रवाद छोप्न खोज्दा पनि जताततैबाट उध्रिन मात्रै थाले पछि राष्ट्रवाद भित्रका गुह्य कुराहरुसमेत बाहिर असरल्ल पोखिएको अवस्थामा पुगेका छन् । वास्तवमा प्रधानमन्त्रीका केहि वरिपरीका मान्छेहरु र नगद नारायणमा बिशिष्ठ योगदान पुर्याईरहेका केहि बदनाम समूहहरुको कारण प्रधानमन्त्री मात्र हैन सिंगो नेकपा नै बदनाम बन्न पुगेको छ । वास्तबमा भन्ने हो भने यिनै धुन्धुकारीहरुले नै सिध्याउने भए नेकपा ।
नेकपा भित्रको पाँच पाण्डबहरुको नामले चिनिएका प्रचण्ड, नेपाल, खनाल, श्रेष्ठ र गौतम समूहको यस पटकको एकतालाई बालुवाटारले प्रधानमन्त्रीको ट्विटरमा सूर्य थापा आफैले आफ्नै निजी मनका भावना लेखेपछि आफैले डिलिट गरेजस्तो हलुका तवरले लिनु नै वास्तवमा नेकपाको विवाद अहिलेको अवस्थासम्म आई पुग्न बल पुगेको हो ।
प्रचण्ड लगायतका सचिवालयका बहुमत सदस्यहरुले पटक पटक बैठक राख्न गरेको आग्रहलाई बालुवाटारले बेवास्ता गर्नु, प्रधानमन्त्री स्वयंले बैठकको कुनै आवश्यकता र औचित्य नदेख्नु, प्रधानमन्त्री नै सर्बेसर्वा हो भन्ने अहम् पाल्नु भन्दा पार्टी भित्रको विवाद समाधान गर्न जतिसक्दो छिटो पार्टीको सचिवालय, पोलिटव्यूरो तथा केन्द्रीय कमिटिको बैठक बस्नुपर्ने टट्कारो आवश्यकता देखिन्छ ।
यदि पार्टीभित्र समस्याका चाँङ्ग थपिदै जाने हो भने प्रधानमन्त्रीलाई सल्लाहकारहरुको जागिर जोगाउन मात्र हैन स्वयं आफ्नाे कुर्सी जोगाउन समेत हम्मेहम्मे पर्ने देखिन्छ । यसले नेकपाको आन्तरिक राजनितिमा मात्र हैन सिंगो देशको राजनैतिक प्रणालीमा असर गर्ने देखिन्छ ।
ओलीले लिखितरूपमा प्रस्ताव पेश गरेपछि बालुवाटारमा क-कसले के बाेले ? १२ घण्टा पहिले
रघुजी पन्त बिरामी हुँदा प्रचण्ड चिन्तित १३ घण्टा पहिले
प्रचण्डकाे प्रतिवेदनप्रति आक्रोशित ओलीले दिए ३८ पृष्ठको जवाफ [ हेर्नुस् पूर्णपाठ ] १४ घण्टा पहिले
बुन्डेसलिगामा बार्यन जित्दा हल्याण्डको डर्टमुण्ड पराजित २३ मिनेट पहिले
नगरप्रमख थापासहित बैतडीका थप १८ जनामा कोरोना पुष्टि ४२ मिनेट पहिले
पुनःनिर्माणका अनुभव र सिकाइको अभिलेख राख्न वेविनारका सुझाव महत्वपूर्ण ४४ मिनेट पहिले
भ्यालेन्सियाको आत्मघाती गोलले एट्लेटिको विजयी ५३ मिनेट पहिले
वाग्मती सरकार रिक्त कर्मचारी व्यवस्थापनको काम गर्दै ५४ मिनेट पहिले
कोरोनाले खुम्चीएको पर्यटन क्षेत्रमा पर्यटकको चहलपहल ५६ मिनेट पहिले
बडिगाडमा मोटरसाइकल दुर्घटना, गम्भीर घाइतेको हेलिकोप्टरबाट उद्धार १२ घण्टा पहिले
प्रहरी हुँ भन्दै ठगी गर्ने युवक पक्राउ २४ घण्टा पहिले
दलित र अपाङ्गताका क्षेत्रमा बजेट प्रभावकारी भएन ६ दिन पहिले
सुनको मूल्य रु एक हजार ८०० ले ह्रास ५ दिन पहिले
नेकपा विभाजन हुने अवस्थामा पुग्दैन : मन्त्री त्रिपाठी ४ दिन पहिले
बेलिजका प्रधानमन्त्री ब्रिसेनोलाई कोरोना संक्रमण ५ दिन पहिले
यती होटेलमा आगलागी हुँदा दुई करोड बराबरको क्षति ६ दिन पहिले
नागढुङ्गामा आफ्नै ट्रकले किचेर साहुको मृत्यु ४ दिन पहिले
सुर्खेतमा बँदेल मारेर मासु बेच्ने ३ जना पक्राउ २ हप्ता पहिले
कुमारी बैंकको साधारणसभा मंसिर २९ मा, बुक क्लोज कहिले ? ६ दिन पहिले
ओलीको नयाँ कदमको पर्खाइमा प्रचण्ड र नेपाल ४ हप्ता पहिले
स्वदेश फर्किएका श्रमिकको सीपको उपयोग कसरी ? ४ हप्ता पहिले
बोर्डद्वारा ३८ अर्बको विदेशी लगानी स्वीकृत २ हप्ता पहिले
पछिल्लो २४ घन्टामा थप १६ जनाको मृत्यु ४ हप्ता पहिले
लोकसेवाको विज्ञापनसम्बन्धी विवादमा आइतबार सुनुवाइ हुने १ वर्ष पहिले
बोलपत्रमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनुपर्ने नेपाली उद्यमीकाे माग ५ दिन पहिले
विप्लव नेकपाको कालिकोटमा कस्तो छ प्रभाव ? २ वर्ष पहिले
कांग्रेस नेता केसीसहित ४ जनामा कोरोना पुष्टि २ महिना पहिले